eNasha.com - कारको इन्जिनमा बिरालोको साता दिन
यदि लेख्ने क्षमता हुँदो हो त अष्ट्रियाली एउटा बिरालोले मज्जैले साता दिनको डायरी लेख्दो हो । उसले एक साता एउटा कारको इञ्जिनभित्र कसरी बितायो र उसको अनुभव कस्तो रह्यो, मान्छेका लागि पनि चाखलाग्दो यात्रा हुँदो हो । तर अपशोच, त्यो बिरालोको अनुभव उसैमा सीमित रह्यो ।
अष्ट्रियाका एक मोटर चालकले आफ्नो उति महंगो मर्सिडिज कारले किन राम्रोसँग काम नगरेको होला भनेर तबसम्म चाल पाएनन्, जब उनले कारको बनेटलाइ नियालेर हेरेनन् ।
बनेटबाट इञ्जिनको एकोहोरो आवाज त आउँथ्यो तर सँगैमा बिरालोको म्याउँम्याउँ पनि घरिघरि सुनिन्थ्यो । आफ्नो इञ्जिनले बिरालोको आवाज निकालेको सुनेर शुरूमा त उनी चकित भए तर पछि जाँच्नै पर्यो भन्ने सोचले कारका मालिक पिटर होचबर्गरले बनेट उठाएर के हेरेका थिए, त्यहाँ छिमेकीको बिरालो अड्केको पो पाए !
त्यसो त उनका छिमेकीले पनि आफ्नो बिरालो तपाइँहरूले देख्नु भो कि भनेर सोधखोज गर्न उनीसमक्ष न आएका पनि होइनन् तर बिरालोले लुक्ने ठाउँ उनकै कारको बनेट पायो भन्ने कुरा उनलाइ कसरी पो ज्ञात होस् !
लुना नामक यस भाग्यमानी बिरालो कसरी बाँच्यो भन्ने कुरा आश्चर्यकै कुरा भएको छ । किनभने खानु न पिउनु ३ सय माइलको यात्रापछि पनि बिरालोको स्वास्थ्यमा उति साह्रो गडबडी नदेखिएको पिटरले बताए ।
यस बिरालोलाइ निकाल्नका लागि इन्जिनको एउटा भाग नै उखेल्नु परेको पिटरले बताए । कारका मेकानिक वाल्टर डोएरफ्लेर, ४८, ले भने, "यस्तो आश्चर्य त मैले मेरो मेकानिक जीवनमा पहिलो पटक भोग्दै छु । कसरी यो बिरालो यति भित्र यसरी लुक्न पुग्यो होला ?"
यस बिरालीका मालिक मालिक्नीहरूले चाहिँ कसैले चोरेको पो हो कि भन्दै शहरभरि पर्चा टाँसेका थिए । उनीहरूले साताभित्रै आफ्नो प्यारी बिरालीलाइ बिना कुनै समस्या पुनः पाउँदा हर्षको सीमा रहेको थिएन ।
उदारता उपाय जनावर माया सेलेब्रिटी सुन्दरी गुगल इन्टरनेट भव्यता बलिउड नग्नता मूर्ख्याइँ विज्ञापन मुद्दा मामिला फट्याइँ हलिउड कीर्तिमान श्रीमानश्रीमती परिस्थिति उदेकलाग्दो